रोहित र मल्लको उत्कृष्ट प्रर्दशनमा नेपाल विजयी | Hamro Khelkud
विश्वकपका उत्कृष्ट ५ बलर
क्रिस गेलले ३ लाख डलर क्षतिपूर्ति पाउने !
विश्कप छनोट ड्र आज : नेपाल पट ५ मा
एम्बाप्पे चम्कँदा पीएसजीको फराकिलो जित
रोनाल्डो र मेस्सी परिवारसँग छुट्टी मनाउँदै
पौडी टोली कोरिया जाँदै
रोहित र मल्लको उत्कृष्ट प्रर्दशनमा नेपाल विजयी
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- आगमी महिना मलेसियामा हुने यू१९ विश्वकप अघि अभ्यासको लागि भारतमा रहेको नेपाली यू१९ क्रिकेट टोलीले पहिलो खेलमा आन्द्र स्टेट यू१९ टिममाथि सहज जित निकालेको छ । बुधबार भएको खेलमा नेपाली टोलीले स्टेटलाई ६२ रनले पराजित गरेको छ ।
२ सय ७७ रनको लक्ष्य पछ्याएको स्टेटले ४५.१ ओभरमा अल आउट हुँदै २ सय १४ रनमा समेटियो । उसका लागि हर्षभरदेन ४६, हेमन्ठ,३८ र पी तेजस्वीले ४३ रन बनाए । नेपालका लागि कुशल मल्ले १० ओभरमा २ मेडन सहित ४१ रन खर्चेर ४ विकेट हात पारे । त्यस्तै कमलसिंह ऐरीले ३,पवन सरार्फले २ र सागर ढकालले १ विकेट हात पारे ।
त्यस अघि पहिला पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले ४८ ओभरमा अल आउट हुँदै २ सय ७६ रन जोडेको थियो । कप्तान रोहित कुमार पौडेलले १ सय १६ बलमा ६ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै ८१ रन बनाए । विश्फोटक ब्याटिङ गरेका युवा खेलाडी कमलसिंह ६ छक्का हान्न बाट चुके । ४८ ओभरको पहिलो,दोस्रो तेस्रो,चौथो र पाँचौ बलमा छक्का हानेका ऐरी अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गर्न खोज्दा आउट भए । ऐरीले २५ बलमा ५ छक्का र २ चौका प्रहार गर्दै ४४ रन जोडे ।
आशिफ शेख छैटौं ओभरको पाँचौ बलमा ९ रनमा क्याच आउटभएपछि मैदान छिरेका रोहितले उत्कृष्ट कप्तानी पाली खेले । रभि कुमार शाह ५ रनमा आउट भएपछि नेपाल १० ओभरमा ४९/४ को कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । तर रोहितले सन्दीप जोरासँग उत्कृष्ट शतकीय साझेदारी गर्दै ३५ ओभरमा १९४/४ को बलियो अवस्थामा पुर्याए । पाँचौ विकेटका लागि सन्दीप र रोहितले १ सय ४५ रनको साझेदारी गरे। दुर्गा कुमारबाट क्याच आउट हुनु अघि सन्दीप जोराले ६४ बलमा ६ छक्का र २ चौका प्रहार गर्दै ६९ रन जोडे । सागर ढकाल ४, रित गौतम ५,पवन सरार्फ ४,आशिफ शेख ९ र कुशल मल्ल १७ रनमा आउट भए । स्टेटका लागि पी तेजस्वीले ४,श्रीकासी रेडी र के वेन्कटेशले समान दुई विकेट हात पारे ।नेपालले आन्द्र स्टेट टिमसँग थप तीन अभ्यास खेल खेल्ने छ ।
बुधबार, श्रावण १, २०७६
फुटबलमा विदेशी खेलाडी – विकल्प, आवश्यकता र विकृति
फुटबलमा फ्रेन्चाइज लिग : सम्भावना भन्दा समस्या बढी
अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता पुरस्कृत
आठौंमा स्वर्ण र कीर्तिमानधारी खेलाडी पुरस्कृत
भलिबलका कप्तान इम असईमा बढुवा
दीपक र रेगन क्वाटरफाइनलमा
‘उपाधिसहित नेपाल फर्कने लक्ष्य’- यू१९ कप्तान रोहित
आइतवार, अषाढ १५, २०७६
ओलम्पिकमा पदक जित्ने प्रिन्सको सपना !
शुक्रबार, अषाढ ६, २०७६
‘नेपाल आउँदा उत्साहित छु’ – भलिबल प्रशिक्षक एबिङ
बुधबार, अषाढ ४, २०७६
मोजाको फुटबल खेल्दै हुर्केकी महिला फुटबलकी सनसनी
मंगलबार, अषाढ ३, २०७६